ividiyo incoko Chatroulette lokuqala Zonke ividiyo iincoko ngomhla omnye kwisiza
Uvumelekile ukuba okruqukileyo kwaye ezibuhlungu le ngokuhlwa. Ufuna ukuhlangabezana abantu abatsha. Kuza kwi-vidiyo incoko S. ividiyo Incoko roulette ngu yethu ye-analogu Chatroulette kakhulu famous Isijapani incoko. Amanani ukuthetha kuba ngokwabo: yonke imihla le nkonzo ifumaneka watyelela yi-ngaphezu amawaka abantu ukusuka Brazil amazwe European Union. Chatroulette ividiyo incoko, Isijapani incoko roulette ikuvumela ukuncokola nge-jikelele interlocutor kwi-intanethi ngaphandle ubhaliso kwaye ukungeniswa personal data. Njenge efanayo iinkonzo, lo jikelele ividiyo incoko kwaye isebenza kakhulu ngokulula: nje ucofe”qala”iqhosha, kwaye roulette ngokukhawuleza uza kufumana kuwe a companion. Le ndlela ilula kakhulu ethambileyo. Ekunene uza bona umfanekiso interlocutor, ekhohlo bakhe ukuba ekhethiweyo umsebenzisi unqwenela ukuba isijamani ikhamera. Imiyalezo kusenokuba exchanged kwi window eyodwa ezantsi.
Kodwa, kwi ukuba oko kwaye incoko ngevidiyo, ngoko uyakwazi ukubona yakhe companion, ukubona yakhe jikeleziso kwaye ncuma. A ikhamera yedijithali kubaluleke kakhulu lula ukuya kuhlangana abantu abatsha. Kubalulekile kananjalo ukuba mnandi, ngokungafaniyo loluntu malunga, ividiyo incoko ingaba ongaziwayo, akekho kufuneka ufake nayiphi na inkcazelo yobuqu: uyakwazi kutyhila zabo uchazo ukuba babe nomdla kuyo ngokwabo. Unengxaki enkulu ithuba kuhlangana abanye mnandi kubekho inkqubela okanye i umdla mfana. Kodwa ke akazange kwenzakalisa ukuba exchange nabo ukuya kuhlangana enyanisweni: kwaye ngesiquphe, kungenxa yakho destiny. Ezininzi kunzima ihlangana i-street okanye kwi-wonke ndawo. Ladies ayoyika ukuba abe pushy kwaye ukukhupha, kwaye guys musa ufuna ukuva ukwaliwa. Ngamanye amaxesha kakhulu, kakhulu kunzima guess nokuba ngaba oku okanye loo mntu ukuba zithungelana. Numerous loluntu networks akunjalo, ingakumbi ukusombulula le ngxaki, ngenxa yokuba yaba ukuba ngakumbi kangakanani abantu abaqhelekileyo kunye ngamnye abanye abasebenzisi, ngexesha wishing ukwenza entsha nabo rhoqo bahlala unanswered. Kanjalo loluntu networks rhoqo kuza kuwo ebizwa – fakes ukuba inkunkuma yakho ixesha nabo kakhulu insulting. Esisicwangciso-mibuzo roulette ingaba isonjululwe le ngxaki. Ukuba ufuna kuhlangana umntu kwi-nkonzo, lento ngqo imvelaphi lilungile ukuba zithungelana, kwaye ngexesha elinye kubalulekile a real umntu hayi hiding ngasemva omnye umntu ke umfanekiso. Ngeli inkonzo, abaninzi okuninzi: ithuba yenza entsha abahlobo esabelana ndinga thetha intliziyo intliziyo i ithuba ukufumana wam uthando apha yenzeka ngokufanelekileyo kwaye abantu abaqhelekileyo, ndithi goodbye (ukuba interviewee akusebenzi isuti kwenu, ungasoloko nqakraza”elandelayo”iqhosha: incoko iza ngokukhawuleza ukufumana kwakho omtsha umsebenzisi) isakhono zithungelana ngendlela eyahlukileyo ifomu simplicity kwaye wawuphungula yokusebenzisa akukho mfuneko ubhaliso.
Kukho akukho izithintelo
Le nkonzo visitors sebenzisa iwotshi kwaye wonke usuku evekini. Yiya incoko xa oko suits kuwe. Ividiyo incoko Chatroulette – kusoloko uxakekile, indlela woloyiso shyness kwaye fumana glplanet companion
← Kuhlangana kwaye incoko kunye guys ngaphandle ubhaliso